30 May 2016 सोमबार १७ जेष्ठ, २०७३
प्रवीण पाठक Be the first to comment!	प्रवीण पाठक मेरो पहाड घर नुवकोटको थान्सिङ भन्ने ठाउँ हो रे। तर बर्सौ पहिले मेरो हजुरबुबा नुवकोटबाट तराई झर्नु भएकाले मेरो जन्म पनि तराइमै भयो। अहिले बसाइचाहिँ बाँकेको कोहलपुर भन्ने ठाउँमा छ। म अस्ट्रेलियमा छात्रवृत्तिमा सिभिल इन्जिनियरिङ बिसएमा स्नातकोत्तर गर्दैछु। यता आएपछि देशमा ठूलो भूकम्प गयो अनि तराईमा आन्दोलन पनि भयो। भूकम्पले आक्रन्त बनेका बेला देशमा नाकाबन्दीले झन् घाउम नुन छर्कने काम गर्यो। आन्दोलन जे जति कारणले भए पनि चार दर्जानभन्दा बढी नेपाली दाजुभाइको ज्यान गयो। विस्तृतमा पढ्नुस्
27 May 2016 शुक्रबार १४ जेष्ठ, २०७३
प्रशान्त लामिछाने Be the first to comment!	प्रशान्त लामिछाने 'हाम्रो एकताले सबैलाई चकित बनाएको छ,' माओवादी घटकहरूको एकीकरण कार्यक्रममा बोल्दै प्रचण्डले भने, 'पार्टीलाई एक नम्बर बनाउँछु।' हलमा ताली बज्यो। कार्यकर्ताका अनुहारमा चमक छायो। यसै गरी र उस्तै गडगडाहटका साथ चार वर्षअघि पनि ताली बजेको थियो, २०६९ असारमा पार्टी विभाजनको औपचारिक घोषणा गर्न आयोजना गरिएको कार्यक्रममा। विस्तृतमा पढ्नुस्